Madaxwaynaha DDSI Oo kulan Layeeshay Maamulada Gobolada, Degmooyinka iyo Maamul magaalooyinka - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI Oo kulan Layeeshay Maamulada Gobolada, Degmooyinka iyo Maamul magaalooyinka
Jigjiga(CN) Arbaco 9kii September, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa labadii nis ee maanta kulan layeeshay maamulada gobolada, kuwa degmooyinka iyo maamul magaalooyinka.
Kulankan oo kadhacay hoolka shirarka ee Qaryaan Dhoodaan ayuu madaxwaynuhu kaga hadlay qodobo dhawr ah oo aad muhiim ugu ah dhanka horumarka iyadoo uu ugu waynaa qorshaha cusub ee mashaariicaha biyo-xidheenada wabiyada, togoga iyo dooxooyinka ee xukuumadu qaadatay sanadkan in laga hirgaliyo ilaa 300 oo goobood deegaanka. Biyahan laxidhayo ayuu madaxwaynuhu sheegay in looga faaiidaysan doono Waraabka dhanka beeraha waa marka 1,aade iyo isticmaalka bulshada iyo xoolahaba si bulshada deegaanka iyo dalkuba uga baxaan saboolnimada oo ah cadawgeena 1,aad maanta. isagoo raaciyay in abuur xul ah oo tayaysan, qalabkii qodaalka, aqoonyahankii iyo suuqii iibkaba loo diyaariyay beeralayda.
Kadibna waxaa halkaa lagu soo bandhigay daraasaadka lagu sameeyay goob-doorashada biyo qabatinada iyo muuqaalo biyo xidheeno horay loo sameeyay laxidhiidha si ay heerarka kaladuwan ee maamulada ugu noqoto khibrad. Waxaana halkaa la isku waydiiyay cidii fulin lahayd. Balse, aqoon iswaydaarsi balaadhan kadib waxaa la isla qaatay in gudi lagu fuliyo mashaariicahaas.
Hadaba goobaha biyo-xidheenada laga samaynayo ee degmo kasta ayaa lagu helay khadka GPSka. Waxaana helay injineero ku takhasusay cilmiga dareeraha.
Waxaa intaa dheer, in madaxwaynuhu carabka ku dhuftay in maamuladu sii xoojiyaan dadaalada dhanka laamaha horumarka sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo beeraha. Isagoo sheegay in cadaalad lagu dhaqmo. Dabagal joogta ahna lagu sameeyo geedi socodyada kaladuwan ee xafiisyada.